Akuwona umsebenzi olula wokwenza izinto ezifashisayo ngezandla zakho. Kodwa ungazisoli isikhathi esichithekile, ngoba ikhono elinjalo lizogcizelela ngokuphumelelayo ukunambitheka, isitayela kanye nobuciko bakho. Njengoba ufunde indlela yokukhipha isikhwama esinamaqoqo enjoloba, ungamangala ngento enhle bonke abangane bakho.
Ibeka imishini yokusekela
Uma uthenga isethi, kufanele ulalewule ngokushesha inombolo ecacisiwe yegamu, ezimweni eziningi kungu-2 000, 3 000 noma 6 000 izingcezu. Lapho kusetshenziselwa imali eyengeziwe, kungcono ama-band elastic, okungukuthi, usayizi ofanayo futhi owenziwe nge-high quality abicah. Zilulekile kahle ekusebenzeni komsebenzi futhi zingasebenzi. Lo mkhiqizo uzobukeka ubumnandi kakhulu.
Kuyinto efiselekayo ukuthenga isethi ephelele kanye nethuluzi lomshini. Ihlinzeka ngamathuba amaningi okudala amamodeli wangempela, futhi imibono eminingi ingenziwa kuphela ngenxa yomshini omkhulu. Slingshot esebenzayo neY. Isethi ingafaka izinto eziningi, njengeziqeshana nazo zonke izinhlobo zezinto zokuhlobisa. Ngosizo lweziqeshana kulula kakhulu ukuxhuma izingxenye zomkhiqizo bese ubala imigqa.
Udinga i hook ukuze usebenze. Njengoba usave isikhwama sezinsimbi zenjoloba ngencishwana encane, kungcono ukusebenzisa ithuluzi lensimbi. I-hook yepulasitiki ayinokwethenjelwa futhi ingaphula.
Ngemva kokuchaza umbala nosayizi womkhiqizo, ungahlala phansi ngokuphepha ukuze usebenze.
Ungayifaka kanjani isikhwama kumshini? Umsebenzi uqala emigqeni emibili, etholakala emaphethelweni. Kuyinto efiselekayo ukususa ophakathi ukuze kungaphazamisi.
Uchungechunge kufanele lubekwe ngendlela yezinto ezibonakalayo, ezihlelwe ngokulandelana. Uma ufinyelela emaphethelweni, kufanele uvule umshini. Olunye umugqa lwenziwa ngokulandelana okufanayo, kepha amakholomu angasetshenzisiwe asetshenziswa.
Manje sidinga ukwenza imigqa emibili eqondile, ivaliwe kumakholomu wokugcina womshini. Khona-ke ungqimba olungezansi lwamabhuloho enjoloba lukhuphuka kahle, futhi imigqa emibili ehambisanayo yenziwa. Ingqimba engezansi iphakama futhi. Kancane kancane ungeza igamu elisha, ususa izindonga zomkhiqizo.
I-palette yombala nefantasy yomklami
Lapho udala isikhwama, inkosi kufanele ihlele kusengaphambili inani le-shades nokubekwa kobubanzi bombala, ngoba imibala ehlanganisiwe emkhiqizo iyoxhomeka ekubukeni kwayo. Ungadlala ngokungafani noma ukushintshwa okubushelelezi kusuka emthunzini owodwa kuya kwenye. Futhi umuntu ufuna isikhwama esenziwe ngamabhangi enjoloba enamandla. Kunamathuba amaningi kakhulu wokuhlobisa ubuso - ubuhlalu, izinwele, izinkinobho ezincane zokuqala.
Lapho usayizi odingekayo usulungile, irowu elifanele kufanele lisuswe kumshini. Okunye okudingekayo ukwakha i-valve ukuze isikhwama singavalwa. Shiya umgodi kuwo - kuleli phuzu kuyoba khona i-loop. Ukwenza lokhu, udinga ukugqoka i-gum ngesikhatsi umsebenzi usuhlobo lwezinto ezibonakalayo.
Ngaphambi kokuba umkhiqizo oqediwe ususwe emshinini, udinga ukulungisa umkhawulo ophezulu wenketho exhunyiwe. Inkinobho idluliswa okokugcina.
Enye indlela yokudonsa
Omasters banikeza enye inketho, indlela yokukhipha isikhwama esenziwe ngama-raber bands. Iqukethe ukuthi uma wenza isendlalelo sokuqala, uphazamisa ama-rubber bands emaphethelweni amabili, futhi udinga ukuwabeka emakholomu afakwe nge-diagonally. Uchungechunge luyafana nokufana nezinhlamvu ze-intersecting "X". Khona-ke ama-elastic bands ahlelwe eceleni komshini womshini, futhi uhla olungezansi lukhuphuka. Lapho usayizi oyifunayo usulungile, kufanele uqine uchungechunge lwe-raber kusuka komunye umugqa. Kuzohlala ukwenza isembozo se-valve - futhi isikhwama singasetshenziswa ekuphileni kwansuku zonke.
Sasihlola indlela yokukhipha isikhwama semigqa yerabha emshinini. Manje ungajabulisa abangani bakho ngokuwabonisa ngezesekeli eziyingqayizivele nenhle. Ngaso sonke isikhathi ungakhetha izinhlobo ezintsha, ezinkimbinkimbi nezinkimbinkimbi - futhi uzisebenzise. Umklamo unqunyelwe umcabango wakho kuphela.
Ungakhipha kanjani isikhwama esikhwameni?
Ithuluzi elilula lokugaya i-plastic slingshot. Angase abe nezidakamizwa ezimbili noma ngaphezulu. Wonke umuntu angafunda ukwenza izinto eziyingqayizivele ngale ndlela.
Okokuqala, umugqa we-zero wenziwa, imigqa emibili eqondile ye-slingshot isetshenziselwa: zifakwa kwi-band elastic ephikisiwe kabili, futhi ukuphela kwesibili kufakwa kukholomu yesibili ngaphakathi. Ngakho kubalulekile ukuphonsa ama-elastics ayisithupha ngokulandelana.
Ama-bands we-raber elandelayo aphikisiwe amabili. Baphonswa emagumbini ngendlela efanayo, kuphela ukushintsha indlela.
Ukuluma i-gum emasendweni angaphandle, nezinsimbi zenjoloba ezivela emgqeni we-zero ziphonswa ngaphakathi. Izenzo ezinjalo ziphindaphindiwe cishe izikhathi eziyisishiyagalombili - konke kuxhomeke kubukhulu besikhwama.
Lapho imigqa isilungile, amaqoqo amabili okuqala enjoloba emgqeni wesibili kufanele aphonswe phezu kwekholomu yokuqala futhi wonke umugqa uboshwe. Kubalulekile ukubuka, ukuthi ibhande lokugcina elithambile lalikhona ngenombolo engezansi.
Ngaphambi kokuthi ususe isikhwama esiphelile esiteshini, udinga ukulungisa amaphethelo ngenye ibhande le-rubber bese wenza iphuzu.
Ukuba ne-crochet hook kuphela, ungakha futhi isikhwama esiyingqayizivele nesingekho ngaphansi. Loluhlobo lwezinsiza lulula. Ngakho-ke, ake sihlaziye ukuthi singayifaka kanjani isikhwama senjoloba nge hook.
Umsebenzi uqala ngegag. Kudalwe ngale ndlela: i-loop yenziwa, khona-ke i-band elashekile iphikisiwe, kanti omunye umkhawulo uphonswa kwi-hook. Ukuze wenze phansi kube lula, ama-mugs amabili asetshenziswa ngesikhathi.
Manje kufanele wenze izixhumanisi ezingu-10, wenze ngesikhathi esifanayo ukuqhuma okubili. Wonke ama-rubber bands agqokwe, futhi abuye ahanjiswe kuqala, asetshenziswe esisekelweni. Amalokhi amabili asele aphinde adutswe nge-hook.
I-gum embalwa elandelayo kufanele ibambe imigqa emine. Ukuphathwa okunjalo kuyaphindwa kuze kufakwe izixhumanisi ezingu-10. Izixhumanisi ezimbili ezilandelayo zenziwa ngebhande elilodwa le-rubber.
Manje ukubopha kuzoshintsha kancane - kuzohamba nxazonke embuthanweni. Izindwangu ezintathu zokugcina ezivela ekhoneni zibalwe, ziphawulwe, futhi umgodi uphuphuka phezulu - ngezinhlangothi ezimbili zebhande elilodwa le-rubber. Sebenzisa indandatho lapho ama-hinges amabili adlula khona, futhi olunye uhlangothi kufanele lubuyiselwe emuva.
I-loop yokuqala kufanele ihanjiswe ngokucophelela kuzo zonke ezinye. Ngemuva kwalokho, i-strap kufanele iswetshwe kuyo yonke isixhumanisi. Isixhumanisi ngasinye kufanele siboshwe ngokuphelele-kuze kube sekupheleni komugqa.
Ekugcineni, kuzomele kube khona izingodo ezimbili, futhi kuphela lapho ingwegwe ishunwe khona. Bese ubeka iris, eselulelwe emaphethweni ohlangothini oluphambene. Nge-loop yokugcina i hook inwetshiwe, futhi ngalendlela izindlela ezintsha ze-irises zihlangene futhi imibuthano emisha ingeziwe.
Kubalulekile ukubuka, ukuthi i-loop yokugcina idlule kuzo zonke ezisele. Iphuzu lizobe lilungele uma imigqa emithathu yekhwama izoboshwa.
Manje udinga ukulungisa isiqeshana noma iphini ukuze kube lula. Isikhungo kufanele siqashelwe ukuze singaphambuki. Ukugcoba kuyaqhubeka ngendlela efanayo, kodwa umbuthano owodwa kuphela usetshenziswa.
Ukuqala komugqa ngamunye kufanele kuphawulwe ukuze ungalahleki ngesikhathi sokusika.
I-gum encane enombala eminingi iveza uhlaka, iphenduke izakhi zokuhlobisa ezihlobisa izingubo futhi zikwazi ukusixhasa. Elastics yenza ubucwebe namathoyizi.
Lokhu kufisa kuye kwavela kakhulu eMelika, kepha manje izingane ezivela emhlabeni wonke ziyajabula ukuza nemiklamo ekhanyayo engavamile eyenziwe ngamabhantshi amancane enjoloba. Izindlela eziningi eziyinkimbinkimbi zisungulwa. Siphendule umbuzo wokuthi ungayifaka kanjani isikhwama sezinsimbi zenjoloba. Namuhla le nqubo ayibangeli muntu. Ngokuphambene nalokho, abaningi bayakuhlonipha, ngoba imikhiqizo ibe yinto engavamile kakhulu.
Asidi i-hyaluronic izinwele: izici zohlelo lokusebenza, ukusebenza, kanye nokubuyekeza
Idlala ku umphumela, noma njengoba e "The Sims 3" ukukhubaza izidingo?